Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo gaari lagu abaalmariyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta Gaaari nuuciisu yahay Suruf ku abaal mariyay Guddoomiyaha Degmada Heliwaa, kadib markii uu ku guuleystay dib u dhiska xarunta degmada oo uu ku dhiisay si iskaa wax u qabso, isagoo kaashanaya bulshada degmada.
Gudoomiye Ku-Xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Tuulax) oo ku wareejiyay Gaariga Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa kula dardaarmay Gudoomiyaha in gaarigaan loogu adeego Shacabka Degmada Hiliwaa, ayna sii labo jibaaraan adeegyada ay u hayaan bulshada.
Dhanka kale Guddoomiyaha Degmada Heliwaa ayaa gaariga isla goobta ku guddoonsiiyay Taliyaha Booliska Sldigga Degmada Heliwaa Cali Maxamed, si loogu xoojiyo howlaha lagu xaqiijinayo amniga degmada.
Mudane Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa dhawaan dib u dhis iyo dib u habeyn ku sameeyay xarunta Degmada Heliwaa, taasi oo uu ku muteystay in lagu abaalmariyo gaari.
Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka oo safar ku tegay Jabuuti